I-Double Mechanical SiC Ceramic Seal Face China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > I-Double Mechanical SiC Ceramic Seal Face
I-double mechanical seal ye-ceramic iyinhlanganisela kokubili izigxobo zokugcina eziphezulu ezibekwe emuva noma emuva, noma uphawu olulodwa oluba nombuso wokugcizelela ezinhlangothini zombili. Ubuso bombhalo we-ceramic bungaba uhlobo olulodwa oluhlanganisiwe noma lwamanzi amaningi ngaphandle kokuthi bangaba nenhlanganisela yokulinganisela / ukungalingani, ukungalingani / ukungalingani noma ibhalansi / ibhalansi yezinhlobo zezinhlobo. Lezi zibonakaliso ze-ceramic zifanelekela ukuhambisa imidiya okungenakukwazi ukuphathwa yizimpawu ezilodwa. Ukuze upholile ubuso be-ceramic seal ngesikhathi sokusebenza, uketshezi olucacile oluhambisanayo luhanjiswa phakathi kwezimpawu ezimbili endaweni engcindezi ephakeme yebha elilodwa kunomshini ophefumulayo. Uphawu lwangaphakathi luvimbela uketshezi ukungena ohlelweni lokujikeleza ngenkathi uphawu lwangaphandle luvimbela ukuba lingangeni emvelweni